famokarana chips - magazine "Potato System"
Tena Label fanamboaran-tsipika
PepsiCo dia hanokatra orinasa famokarana sakafo masira any amin'ny faritr'i Novosibirsk amin'ny fiandohan'ny taona 2022, ny lehiben'ny biraon'ny solontenan'ny fampiasam-bola ...
Sergey Artemov Harvest dia tsy mankasitraka chips. Ny isan'ireo fonosana misy tsakitsaky malaza dia mety hihena amin'ny talantalan'ny magazay noho ny tsy fahampian'ny ...
Tsy misy ovy lehibe ny processeur
Ny tsy fahampian'ny ovy lehibe atsy ho atsy dia mety hiteraka korontana amin'ny famoahana chips. Raha ny filazan'i Kommersant, Frito Lei ...
Ny faritr'i Moskoa dia iray amin'ireo mpitarika amin'ny famokarana vokatra ovy
Araka ny valin'ny enim-bolana tamin'ny 2021, ny faritra Moskoa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny habetsaky ny famokarana vokatra ovy. Notantaraina momba izany ...
Ny mpanao Chip Pringles dia mitatitra ny fitomboan'ny tombom-barotra
Kellogg Co., tompon'ny marika serealy, tsakitsaky ary Pringles, dia nahazoam-bola 2021 miliara dolara tamin'ny tapany faharoa tamin'ny 7,14 ...
Ho lasa fitaovana manta amin'ny famokarana zezika ny peelings ovy
PepsiCo, izay tompon'ny Walkers, dia miara-miasa amin'ny CCm Technologies fanombohana hanavao ny teknolojia fisamborana karbonika. Notaterin'i ...
PepsiCo dia nanangana tsipika vaovao amin'ny famokarana chips any amin'ny faritr'i Moskoa
Raha ny filazan'ny Ministeran'ny fampiasam-bola, ny indostria ary ny siansa ao amin'ny Faritra Moskoa, ao amin'ny orinasa PepsiCo ao an-tanànan'i. Kashira (LLC "Frito Lay Manufacturing") ...
Soso-pisakafo ho an'ireo izay misakafo amin'ny sakafo
Ny orinasa britanika Nudie Snacks dia nandefa varotra varimbazaha sy legioma. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy tsiro roa amin'ny karazany: ...
Pringles: nanomboka tamin'ny mofomamy izy rehetra, ary nandeha tamin'ny seza robotic
Amin'ny fomba ofisialy, ny chips Pringles dia nantsoina hoe cookies hatrizay, satria ambany ny ovy ao anatiny - 42% fotsiny, ny ambiny dia lafarinina ...
Ny mpandraharaha belarosiana ambony 5 izay nanapa-kevitra ny hanampy vokatra ao amin'ny olany lehibe indrindra
"Fa inona no hohaninay?" - volana vitsivitsy lasa izay, hoy i Alexander Lukashenko, rehefa nahita tatitra ampy tamin'ny fahitalavitra, toy ny tamin'ny vanim-potoanan'ny quarantine ecumenical tsy nisy tanan'ny vahiny vahiny romana ...
Ny minisiteran'ny fambolena dia nanatanteraka fihaonana niaraka tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny tetikasa feno ho an'ny famokarana voa sy ny ovy
Ny ovy ao amin'ny faritra Sverdlovsk dia namboly tamin'ny velaran-tany 13,6 ha